Izinkoleloze mayelana nokudlwengulwa
Inkoleloze ngumqondo noma indaba ekholwa ngabantu abaningi kodwa engesilo iqiniso. Okubuhlungu ngukuthi abantu abaningi basakholwa yizinkoleloze mayelana nokudlwengulwa, kanti nazi izinkoleloze ezijwayelekile mayelana nokudlwengulwa ezingesilo iqiniso:
INKOLELOZE: Abasoze badlwengulwa abafana.
IQINISO: Wonke umuntu angadlwengulwa.
INKOLELOZE: Akusikho ukudlwengulwa uma isisulu singakusho kucace ukuthi 'cha'
IQINISO: Ziningi izindlela umuntu angasho ngazo ukuthi akafuni ukwenza ucansi. Ngukuthi yebo kuphela okusho ukuthi yebo.
INKOLELOZE: Akusikho ukudlwengulwa uma intombazane/owesifazane egqoka izingubo ezimfushane eziveza umzimba.
IQINISO: Ngisho ngabe intombazane/ owesifazane ugqokeni, izingubo zokugqoka azisho ukuthi uvuma ukwenza ucansi.
INKOLELOZE: Abantu abaningi bavame ukuqamba amanga ngokudlwengulwa ngoba sebezisola ngokwenza ucansi nomuntu othile.
IQINISO: Abantu baqamba amanga ngabo bonke ubugebengu, hhayi ngokudlwengulwa kuphela. Bambalwa abantu abaqamba amanga ngokuba yizisulu zobugebengu.
INKOLELOZE: Akusikho ukudlwengulwa uma owesifazane nowesilisa beshadile noma benobudlelwano.
IQINISO: Kubona bonke ubudlelwano obukhona, unelungelo lokuthi CHA ocansini.
INKOLELOZE: Abanye abantu bathi 'cha' kodwa bebe beqonde ukuthi 'yebo'.
IQINISO: Ukuthi CHA kusho ukuthi CHA!
INKOLELOZE: Uzicelela ukudlwengulwa uma uya endaweni engaphephile efana nendawo eyaziwayo ukuthi ayilungile noma uya esipotini.
IQINISO: Ungadlwengulwa noma ikuphi, ngisho nakwakho imbala.
INKOLELOZE: Abadayisa ngomzimba abasoze badlwengulwa.
IQINISO: Abadayisa ngomzimba bangabantu nabo kanti banelungelo lokuvuma noma ukwenqaba ukwenza ucansi.